बिमस्टेक सुरक्षाको फ्रन्टलाईनमा सेना, कति सुरक्षाकर्मी खटिदैं ? – Everest Dainik – News from Nepal
बिमस्टेक सुरक्षाको फ्रन्टलाईनमा सेना, कति सुरक्षाकर्मी खटिदैं ?
काठमाडौँ, भदौ १२ । बहुपक्षीय प्राबिधिक तथा आर्थिक सहयोगकालागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन लक्षित सुरक्षार्थ प्रयोजनका लागि ४ वटै सुरक्षा निकायबाट करिव १८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् ।
नेपाल-भारत खुल्ला सिमानाका कारण सुरक्षामा असहजता नआओस भन्ने हेतुले नेपाल भित्रिने मुख्य नाकामा समेत सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ । सम्मेलन सुरक्षाको ‘फ्रन्ट लाइन’मा सेना खटिदैछ भने सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको सुरक्षा जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दैछ । सुरक्षाको दोस्रो र तेस्रो घेरामा क्रमशः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानको टोली परिचालन हुँदैछ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
आवश्यकता अनुसार सेना सम्मेलन सुरक्षार्थ खटिएको बताउँदै सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो-‘यस अघिका अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनको प्रमुख सुरक्षा नेपाली सेनाले गरेको थियो, यसपटक पनि विशिष्ट पाहुनाको मुख्य सुरक्षा सेनाले गर्दैछ ।’ विमस्टेकका लागि सेना कति खट्दैछ भन्ने संख्या यकिन नभएपनि करिव ५ हजारका हाराहारीमा सैनिक परिचालन हुने सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ ।
विमस्टककै लागि नेपाल प्रहरीबाट करिव ९ हजार, सशस्त्र बलका ३ हजार ५ सय र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका ५ सय भन्दा बढी सुरक्षा अधिकारी खटिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
ट्याग्स: Nepal Army, Nepali senaa, बिमस्टेक, सुरक्षाकर्मी
अनुमति बिना कुनैपनी कार्यक्रम नगर्नु:नेपाली दूतावास कतार
चिर्पट प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ